करोडपति पनि रोडपति हुन बेर लाग्दैन, पर्समा यस्ता खाले सामानहरु राख्दै नराख्नुहोस् —
एजेन्सी । तपाई’ले गरे’को प्रग’ति स्वाह हुन कत्ति’बेर लाग्दै’न । तपाई’ले पर्स’मा पैसा’को साथै अरु के के सामान’हरु राख्ने गर्नु भएको छ ? केही यस्ता वस्तु’हरु पर्समा राख्दा अशुभ मानिन्छ । त्यस्ता अशु’भ सामान’का कारण हामी’लाई कंगाल समेत बनाइ’दिने गरेको छ । वास्तु’का अनु’सार पर्समा औषधी राख्दा पैसा निकै खर्च हुन्छ ।
अश्लिल चित्र र सामग्रीले भाग्यमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ जसले खल्तीको साथै घरको ढुकुटी पनि खाली हुन थाल्छ । बिल, रसिद, एटीएमको पर्चा आदि राख्नु वास्तुका अनुसार अशुभ मानिन्छ । ब्लेड, चक्कु र धारिलो वस्तु पर्समा राख्दै नराख्नुहोस् । यस्ता वस्तु राख्दा आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । पर्समा फलमा राख्दा नकरात्मक उर्जा पैदा हुन्छ जसले हानीमात्र गर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! यि हुन डि’भोर्सका कारण चर्चामा आएका नेपाली सेलिब्रेटी’हरू जानिराखौ !
काठमाडौँ । धेरै जसो नेपाली मिडियामा बलिउड/हलिउडमा हुने डि’भोर्सका बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढे सँगै नेपाली सेलिब्रेटिहरूको डि*भोर्सले पनि निकै चर्चा पाउन थालेको छ । उनीहरूको रिल लाइफमा जस्तो सुकै भूमिकामा देखिएपनी रियल लाइफमा जो कोही आफ्नो सम्बन्धबाट टाढिन चाहिरहेको हुँदैन । तर भने जस्तो कसको पो हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाली स्रेलिब्रेटीको पनि विवाह भएको केही समयमै डि*भोर्सका खबरहरू सुन्नमा आएका हुन्छन् । तर तर, केही जोडी भने उदाहरणीय पनि बनेका छन् । आउनुहोस् हेरौँ डि*भोर्सका कारण चर्चामा रहेका केही नेपाली सेलिब्रेटीहरू का बारेमा ।
प्रियंका कार्की र रोचक मैनालीः उनको पुर्वपतिको नाम रोचक मैनाली हो । प्रियंकासँगको डिभोर्सपछि रोचक पुनः वैवाहिक बन्धनमा बाधिसकेका छन् भने प्रियंका कार्की आयुष्मानसँग विवाह गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् ।
रिमा विश्वकर्मा र रोवर्टः यो जोडीले पनि विवाह गरेको दुई वर्षमा नै डिभोर्स गरेका थिए । पहिलो वर्षसम्म राम्रो सम्बन्ध रहेता पनि त्यसपछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनीहरुले डिभोर्स गरेका थिए ।
छवि ओझा र रेखा थापाः यो जोडीको डिभोर्सको चर्चा लामो समयसम्म चल्यो । आज पनि रेखा र छविको सम्बन्धबारे उत्तिकै चर्चा चल्छ । तर, यो जोडीको वैवाहिक जीवन भने सुखद हुन सकेन । अन्ततः यो जोडीले पनि डिभोर्स गरे । छवि र सिल्पा पोखरेलको विवाहको हल्ला लामो समयदेखि चलिराखेको छ ।
भुवन के सी र सुस्मिता के सी बम्जनः नेपाली फिल्म जगतका चर्चित अभिनेता हुन् भुवन के सी । उनले सुस्मितासँग विवाह गरेका थिए । तर, लभ म्यारिज गरेको यो जोडीको सम्बन्ध पनि लामो समय टिक्न सकेन । अन्तत यो जोडीले पनि अल्लगिएर बस्ने निर्णय लियो । यी दुईको सन्तान अनमोल के सी पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका महँगा अभिनेता हुन् । भुवन जियासँग लिभिङ टुगेदरमा रहेको बताइन्छ ।
आकाश शाह र सञ्जिता लुइटेलः नेपाली फिल्ममा कुनै समय व्यस्त रहेकी अभिनेत्री हुन् सञ्जिता लुइटेल । फिल्म करिअर सुरुवातसँगै उनले आकाश शाहसँग विवाह गरिन् तर, उनको विवाह लामो समय टिक्न सकेन । अन्ततः उनले आकाशलाई डिभोर्स दिदै अभिनेता निखिल उप्रेतीसँग विवाह गरिन् ।मनिषा
कोइराला र सम्राट दाहालः विवाह भएको ६ महिनामै यो जोडीको डिभोर्स भएको थियो । पछि एक मिडियासँग कुरा गर्ने क्रममा उनले आफु वैवाहिक जीवनका लागि फिट नभएको बताएकी थिइन् ।